Iplagi yePostPost yeWordPress ephuculweyo | Martech Zone
NgeCawa, uJuni 14, 2009 NgeCawa, ngo-Novemba 16, 2014 Douglas Karr
Esi sithuba siphelile. Kukho intabalala kwindawo yokugcina izinto - enye endiyifumeneyo intle kakhulu Emva koMxholo.
Enye yeeplagi ezidumileyo endizenzele iWindowsPress yiPostPost. Abantu abaninzi banqwenela ukwenza ngokwezifiso amaphepha abo, iiposti kunye nokutya kodwa ukuyenza ngaphakathi komhleli womxholo kunokuba nzima kakhulu. Le iplagi ikuvumela ukuba ubhale umxholo ngaphambi okanye emva kwezithuba kwiphepha elinye, onke amaphepha, okanye nje kumxhesho wakho.
Kutshanje, bendisenza ukhuphiswano ndinikezela ngokutya kwam kwaye iplagi ifike iluncedo! Ndibeka umyalezo phambi kweposti yam yokondla ukuze abantu bandithumelele i-imeyile ngesihloko esithile. I-imeyile yokuqala endiyifumeneyo iphumelele umrhumo we- $ 125 kwimagazini ye-net, imagazini emnandi egubungela itoni yezihloko ngetekhnoloji ye-Intanethi (kunye nentengiso). Kwiintsuku ezimbalwa kamva, ndaye ndazisa ophumeleleyo nge-plugin!
Iposi yePost ikuvumela ukuba wenze imali kwi yi_yondliwa, yi_phepha kwaye ngu_single imisebenzi yeWordPress ngaphandle kokuqonda indlela yokuhlela umxholo wakho okanye ukubhala ikhowudi. Khuphela iPostPost ukusuka kwiphepha lePlagi.
Andihlali ndihlaziya iplagi ngaphandle kokuba ndifumene ingxelo yetoni yento ethile okanye ndizama ukufunda into entsha. Kule meko, bendifuna ukufaka i-jQuery efakwe kwi-WordPress. Kwakungekho lula njengoko ndandicinga, nangona kunjalo. Kuqala, kuye kwafuneka ndongeze isakhelo kwiplagi kunye nomsebenzi othile we-WordPress PHP:
Ngaphakathi kwekhowudi ye-jQuery, kukho uhlengahlengiso oluncinci ngokunjalo. Ngokwesiqhelo, umnxeba wokuqalisa jquery uhlala ubhalwa ngolu hlobo:
$ (document) sele (umsebenzi ()
Ngaphakathi kwiWindowsPress, kujongeka njengoku:
jQuery (uxwebhu) sele (umsebenzi ($)
Le yayiyiprojekthi eyonwabisayo kwaye iye yaluncedo ngokwenene! Ewe kunjalo, ndongeze enye ikhowudi ukupapasha ukutya kwebhlog yam kwiphepha lolawulo ngokunjalo- yiplagi yasimahla, kungoko kutheni ungayikhuthazi ibhlog yam ngokutshintshiselana.
tags: emva komxholoemva kweplagin yomxholoemva kweposiiposti yeposiumva wokuthumelaIposi yeposiiplagi yamagama
I-Safari 4 ikhutshiwe-Mkhulu umlilo!
Juni 14, 2009 ngo-6: 07 PM
Esinye isizathu sokuthanda iWindowsPress. Enkosi!
Ngaba nguAmit Roy
Nov 16, 2014 kwi-8: 56 AM
Ndingayikhuphela njani le plugin? "Https://martech.zone/projects/postpost/" eli phepha alisebenzi
Novemba 16, 2014 ngo-12: 41 PM
Siyiphelisile le plugin. Zininzi izinto ezintle ezixhaswe kwindawo yokugcina izinto - jonga Emva koMxholo.